तपाईले पढ्नु पर्ने इतिहासका ११ वटा उत्तम पुस्तकहरू वर्तमान साहित्य
११ वटा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
एनकर्नी आर्कोया | | किताबहरु
पुस्तकहरू धेरै लामो समयको लागि थिए। वास्तवमा, यो ज्ञात छ कि इतिहासमा पहिलो मुद्रित पुस्तक ११ मे, 11। मा विमोचन भएको थियो। यो चीनमा वा J्ग जीले "दि डायमंड सूत्र" पुस्तकको छपाई र वितरणलाई अधिकृत गरेका थिए। यो वास्तवमै पहिलो हो, र यो गुटेनबर्ग बाइबल हो भन्ने थिएन। तर वर्षौंदेखि त्यहाँ सबैभन्दा उत्तम किताबहरू पनि भएका छन्।
यदि तपाइँ पत्रहरूको प्रेमी हुनुहुन्छ, वा यदि तपाइँ उत्सुक हुनुहुन्छ जान्नुहोस् कि इतिहासमा सब भन्दा राम्रो पुस्तकहरू के हुन्, त्यसोभए यो प्रकाशनले तपाईंलाई चासो लाग्नेछ किनकि हामी तपाईंलाई केही कार्यहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन त्यहाँ सर्वश्रेष्ठ भएको वर्गीकृत गरिएको छ। के तपाईंले पढ्नुभएको कुनै कुरा छ?
1 गिलगामेष कविता
2 केहि कोकोको निडस माथि उड्छ
3 100 वर्ष एक्लैपन
4 पङ्क्तिको प्रभु
5 सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरू: काम को पुस्तक
6 सबैभन्दा उत्तम पुस्तकहरू: अरब रातीहरू
7 अपराध र सजाय
8 सर्वश्रेष्ठ किताबहरू: हंस क्रिश्चियन एन्डरसनको दास्ताहरू
9 दिव्य कमेडी
11 सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरू: गर्व र पूर्वाग्रह
विश्व पुस्तकालय अनुसार यो इतिहासको सब भन्दा राम्रो पुस्तक हो जुन 100 100 विभिन्न देशका १०० लेखकको प्रस्ताव अनुसार १०० सर्वश्रेष्ठको सूची स्थापना गरिएको हो। किन यो पुस्तक छनौट गरियो? ठिकै कुरा त यो छ, यो ईसापूर्व सत्रौं शताब्दीदेखि सुमेरिया र अक्कडियन साम्राज्यबाट आएको हो र त्यो भाषामा लेखिएको छ।
यसमा हामीलाई राजा गिलगामेशको रोमांचको बारेमा बताइएको छ, जो एक प्रजासत्ताक राजा थिए जसले आफ्ना प्रजालाई दुर्व्यवहार गरे। ईश्वरले उनलाई एउटा पाठ दिन, एन्किडु पठाउनुहोस्, जो गिलगामेषको सामना गर्नुपर्नेछ; तर तिनीहरू अन्त मित्र बनिन्छन् र तिनीहरू सँगै केहि दुश्मनहरूलाई पराजित गर्न उद्यम गर्न थाल्छन्।
केहि कोकोको निडस माथि उड्छ
यो अनौंठो शीर्षक वास्तवमै सब भन्दा राम्रो पुस्तकहरू मध्ये एक हो। वास्तवमा, नेटफ्लिक्सले उनको श्रृंखला रचेड बनाउन उनीतर्फ फर्क्यो, किनकि यहाँ नायक एक अत्याचारी नर्स हो जसले ओरेगन मनोचिकित्सा अस्पताललाई अपरंपरागत तरिकामा हेरचाह गर्छन्।
यो १ K in२ मा केन केन्सेले लेखेका थिए र उनको दिनमा अश्‍लील सामग्रीको रूपमा लिइएको हो वा यसले आपराधिक व्यवहारलाई बढावा दिएको कारणले ठूलो हंगामा मच्चियो।
100 वर्ष एक्लैपन
गेब्रियल गार्सिया मार्क्वेज द्वारा लिखित यस पुस्तकलाई इतिहासकै सब भन्दा राम्रो मानिन्छ किनभने यो भनिएको कथानकको कारण हो, तर लेखकले सबै कुरा बताउने तरीकाको कारणले। यसमा, तपाइँ बुवेन्डा-इगुवार परिवार, कल्पनाहरू, जुनाहरू, डराउने, दुर्घटनाहरू, आदिको जीवनको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। जसले उनीहरूलाई घेरेको छ र त्यसले वर्षहरू बित्दछ र तिनीहरूको राम्रो भाग्यलाई परिमार्जन गर्दछ।
यसमा कुनै श is्का छैन कि जेआरआर टोलकिनले कल्पनको रचना यति महत्त्वपूर्ण बनायो कि यो इतिहासको सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरूको सूचीमा उपस्थित हुनुपर्दछ। र यो यो हो कि लेखकले यस पुस्तकमा के गरे एक ओडिसी थियो। उनले बिल्कुलै सबै चीजहरू आविष्कार गरे, धेरै कथानक थ्रेडहरूको साथ, एउटा जटिल र विशाल कथा जुन उसले अर्को ग्रहको काम र चमत्कारहरू गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ। र केहि चरित्रहरू जुन नायक वा खलनायकको रूपमा थिएनन् जस्तो उनीहरू पहिले देखिन्थ्यो। थप रूपमा, त्यहाँ वास्तवमा एक मुख्य पात्र होइन, तर धेरै हो, र एक आविष्कार गरिएको संसार जुन कम लेखकहरूले अनुकरण गर्न सकेका छन्।
सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरू: काम को पुस्तक
यो पुस्तक कसले लेखेका थिए भन्ने कुरा थाहा छैन, यद्यपि यो ई.पू. XNUMXth औं-शताब्दी शताब्दीको हो। यसमा तपाईं ईश्वरभीरु र अति असल मान्छेको कथा पाउनुहुनेछ। जब परमेश्वरले शैतानसँग यस मानिसका बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, शैतानले "प्रलोभन" लिने निर्णय गर्दछ ताकि ऊ देख्दछ कि ऊ उस्तो छैन जस्तो उसले आफूमा विश्वास गरेको जस्तो देखाउँछ। त्यसकारण अय्यूबले पाप गरोस् भनेर उनले परीक्षा र प्रलोभनहरूको सामना गर्नु पर्छ। यद्यपि यो सजिलो छैन जस्तो देखिन्छ।
र यो यो हो कि पुस्तकमा यसको अक्षरहरूको बीचमा एउटा ठूलो दर्शन छ, यो लेख्न, यो बुझ्न कठिन भए पनि, खास गरी अहिले, यसले धेरै अज्ञातहरूको जवाफ दिन्छ वा तपाईंलाई ती कुराको बारेमा सोच्न लगाउँदछ जुन तपाईंले पहिले लिनुभएन।
सबैभन्दा उत्तम पुस्तकहरू: अरब रातीहरू
सन् 700०० र १ 1500०० को बीचमा लिखित, कसैलाई थाहा छैन कि कसलाई थियो, द हजउन्ड र वन नाइट्सले राजकुमारी शहेराजादेको कथा सुनाउँदछन्, जसले कथाको बखान गरेर सुल्तानशहरिको वधलाई रोक्ने काम रोक्दछन्।
र तथ्य यो हो कि राजकुमारी, सुल्तानको मनोरंजन गर्न, उसलाई बिभिन्न कथाहरू सुनाउन थाल्छ ताकि उसले सबै बिर्सनेछ।
अपराध र सजाय
१y1866 मा फ्योदोर दोस्तोएवस्कीले लिखित यो काम लेखकको सबैभन्दा जटिल र उत्कृष्ट कृति हो। तपाईले यसमा के पाउनुहुन्छ? ठिक छ, हामी रस्कोल्कनिकोभको बारेमा कुरा गर्दैछौं, एक विश्वासको साथ एक युवा विद्यार्थी जुन तपाईंसँग टकराउन सक्छ। तथापि, बिस्तारै ऊ सिक्दैछ कि सायद उसले जे सोचेको थियो त्यो गर्न उचित थिएन होला।
सर्वश्रेष्ठ किताबहरू: हंस क्रिश्चियन एन्डरसनको दास्ताहरू
द लिटिल मरमेड, द कुरूप डकलिंग, टिन सोल्जर एन्डरसनका केहि कथाहरू हुन् जुन विश्वव्यापी रूपमा परिचित छन्। र सत्य यो हो कि यो इतिहासको सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरू मध्ये एक हो, घरका साना बच्चाहरूको लागि आदर्श।
अवश्य पनि कहिलेकाँही, वास्तविक कथा जान्नु खराब कल्पना हुनेछैन र कसरी उनीहरूले यसलाई परिकथा बनाउँदछन् (किनकि यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने कथा र "" बीचमा ठूलो भिन्नता छ। वास्तविक "कहानी)।
१२1265 र १1321२१ बीचमा डन्टे एलिघेरी द्वारा लिखित, यो एक कविता हो जुन सब भन्दा उत्तम मानिन्छ। कविता भएको, र पुरानो पनि, यो प्रतीकहरू, रूपक र वाक्यांशहरूले भरिएको छ जुन सुरुमा धेरै बुझ्न सकिदैन। तर यो सब भन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो किनकि विज्ञहरूका आफैले भनेका अनुसार यसमा सबै ज्ञानहरू छन् जुन शताब्दीयौंदेखि हासिल भइसकेको छ (अवश्य पनि यो लेखिसके सम्म)।
यो मिति शीर्षक थियो कि जर्ज ओर्वेल आफ्नो पुस्तक को लागी छ, इतिहास को एक सबै भन्दा राम्रो। यसमा उनले हामीलाई १ 1984। XNUMX मा लन्डनमा राखेका थिए जहाँ शहर दिक्क लाग्ने स्थितिमा रहेको देखिन्छ।
त्यहाँ तपाईंले विन्स्टन स्मिथलाई भेट्नुहुनेछ, जो एक प्याला हो जसले पार्टीको आधिकारिक संस्करण हुन चाहेको अनुरुप इतिहास लेख्न आवश्यक छ। तर उसले सोच्न थाल्छ कि यदि उसले जे गरिरहेको छ त्यो गर्नु भनेको सही कुरा हो र यदि उसले शासन गर्ने प्रणाली वास्तवमा राज्य हो भने।
सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरू: गर्व र पूर्वाग्रह
जेन अस्टेन ती महिला लेखक हुन् जसले "इतिहास" मा सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरूको अंश बन्ने हो। उनले वास्तवमै धेरै लेखेका थिए, तर इलिजाबेथ बेनेट र फिट्जविलियम डार्सीको कथा प्राइड एण्ड प्रेज्युडिस, पक्कै पनि एक उत्कृष्ट कृति हो। वास्तवमा, यति धेरै रुपान्तरणको साथ, कहानी निस्सन्देह ज्ञात छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » ११ वटा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
एनरिक रोइओ भन्यो
मैले ती सबै पढें तर मेरो विचारमा, लेस मिसेरेबल्सलाई छोड्न सकिदैन, डन क्विटोट डे ला मन्चा जस्ता नै।
Enrique Royo लाई जवाफ दिनुहोस्
लिओपोल्डो अल्बर्टो ट्र्का सासिया भन्यो
शुभकामना पुस्तकालयका सबै सहकर्मीहरूलाई, यस अवसरमा सिफारिस गरिएका पुस्तकहरू वास्तवमै धेरै राम्रा पुस्तकहरू हुन्, तर कुनै पार्टी पानीको इरादा बिना वा फिक्का एक ल्याउने को लागी, उनीहरूले यति महँगो खर्च गरे र यसमा थपिदिए « समस्या »(यदि यो त्यस्तो रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ भने), अर्जेन्टिना रिपब्लिकमा हामीसँग डलरको" लीकेज "बाट बच्न आयात बन्द गर्ने समस्या छ र त्यसैले पुस्तकहरू उच्च विनिमय दरको कारण महँगो मात्र होइन, तर प्राय: त्यहाँ शीर्षकहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन, जुनसुकै अवस्थामा पनि यो वास्ता र विचारलाई पुनःभेट ​​गर्ने कुरा हो, हामीसँग रहेको हाम्रो साहित्यिक रचनालाई हेरेर र सम्झना गर्दै, जसले यो प्रमाणित गर्दछ: A लेखक बिना, त्यहाँ साक्षरता हो, तर यदि कुनै पाठक नै छैन भने, साहित्यको अभाव छ ", मलाई लेख्ने यो अवसर दिनुभएमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र मलाई खातामा राख्नु भएकोमा र तपाईको सूचीमा तपाइँले नियमित रूपमा पठाउनु भएको जानकारी प्राप्त गर्न जारी राख्नु भएकोमा धन्यवाद।
अरू कुनै खास छैन
म तपाईलाई अंगालो हाेछु
लिओपोल्डो अल्बर्टो ट्र्का सासिया
लिओपोल्डो अल्बर्टो ट्र्का सासियालाई जवाफ दिनुहोस्
कार्लोस गोमेज गुएरेरो भन्यो
शीर्षक अनुसार होईन। जे भए पनि यो हुन सक्छ: "एघार जना ज्ञात पुस्तकहरू जुन म यहाँ राख्न सोच्न सक्छु।"
कार्लोस गोमेज गुएरेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
डेव Palomares भन्यो
मलाई लाग्छ कि यस लेखको शीर्षक "मैले पढेको सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू" हुनुपर्दछ। संयोगवश, लेखक न त जानकारी को स्रोत संकेत गरीएको छ। व्यक्तिलाई क्लिक गर्न र विज्ञापनकर्ताहरूलाई चार्ज गर्नको लागि विशिष्ट वस्तु।
डेभ Palomares लाई जवाफ दिनुहोस्
जुआन कार्लोस ओकम्पो रोड्रिग्ज भन्यो
११ पुस्तकहरू विश्‍वव्यापी साहित्यको उत्कृष्ट कार्यहरूको मात्र works% हुन्; न त यो मात्रात्मक कारक हो, लेखक, पाठक र विषयको गुणात्मक तत्त्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ
जुआन कार्लोस ओकँम्पो रोड्रिगलाई जवाफ दिनुहोस्
लुडविग विट्जेन्स्टीन भन्यो
मलाई यो अन्तिम पनी लाग्दछ कि पुस्तक र साहित्यको कारोबार गर्ने लेख एकदम नराम्ररी लेखिएको छ। न केवल प्रत्येक पुस्तकको समीक्षाहरू केही पर्फनक्टोरीको कम हुन्छन्, तर त्यहाँ लेखोटमा धेरै भ्रमहरू छन्।
Ludwig Wittgenstein लाई जवाफ दिनुहोस्
शमूएल सेडिल्स भन्यो
मलाई यो अन्तिम पनी लाग्दछ कि पुस्तक र साहित्यको कारोबार गर्ने लेख एकदम नराम्ररी लेखिएको छ। केवल अफसोस लेखन त्रुटिहरू, तर
दु: खी र सतही समीक्षा को लागी प्रत्येक पुस्तक पोष्ट। यसबाहेक, पुस्तकहरूको चयन व्यक्तिपरक र बहसयोग्य छ।
शमूएल सेडिल्सलाई जवाफ दिनुहोस्
यस सूचीको कुनै टाउको वा पुच्छर छैन। तिनीहरूले रिंगको प्रभु राखे र डोन Quixote र ह्यामलेट बाहिर। Absurd। गिलगामेशको उल्लेख नगरी बाइबल वा कुरान छोड्नुहोस्
एन्टोनियो गोन्जालेज भन्यो
शीर्षक हुनुपर्दछ: read सबै भन्दा राम्रो ११ पुस्तकहरू जुन मैले पढेको छु », किनकि तपाईको चयनले यस्तो देखिन्छ कि तपाईले थोरै पढ्नु भएको छ, वा जसले यो गरेका छन्। तिनीहरू पक्कै राम्रो किताबहरू हुन्, बिना कुनै श ,्का, तर त्यहाँ अझ धेरै राम्रो पुस्तकहरू छन्, जुन उनीहरूको स्थायित्वलाई शताब्दीयौंदेखि सबै भन्दा पढिनेहरूको बीचमा दिइन्छ, उनीहरूको गुणस्तर प्रमाणित नगरी बढी छ। तपाईको राष्ट्रिय टीमको साथ तपाई राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ, तर मलाई लाग्छ कि शीर्षक बमवर्षक र अहंकारी छ।
एन्टोनियो गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
Estelio मारियो PEDREAÑEZ भन्यो
ओडिसी, द Iliad र डॉन Quixote सूची मा छैन। यो धिक्कार सूचीबाट सबै विश्वसनीयता लिन्छ। र त्यहाँ धेरै तेस्रो-दर पुस्तकहरू छन्। यस्तो देखिन्छ कि जेम्स जोइस सहि थिए: जनमानस, लिओपोल्ड ब्लोम, ओडिसेस, युलिसिसमा विजयी।
Estelio मारियो PEDREAÑEZ लाई जवाफ दिनुहोस्
स्टेला मारिस पेरेरा रेक्जो भन्यो
"गीतहरूको गीत" (राजा सुलेमानको श्रेय) र "हार्ट" (एडमन्डो डे एमिकिस)। पछिल्लो पहिलो पुस्तक म पढें जब म 8 बर्षको थियो।
स्टेला मारिस पेरेरा रेक्जोलाई जवाफ दिनुहोस्
साहित्यिक कृतिहरूको अद्भुत सूची, मैले ती मध्ये धेरै पढें र ती शानदार छन्, १ 1984। XNUMX, अपराध र सजाय मेरो मनपर्ने मध्ये एक हुन्।
इन्जिनियस जेंटलमैन र सानो प्रिन्स समावेश नगरेका उत्तम पुस्तकहरूको सूची अब सर्वश्रेष्ठ डे फेको पुस्तकहरूको सूची होइन।
क्षमा मोन्टे क्रिस्टो को गणना छुटेको छ
ग्लेडिस एवलिन म्यापल हेड भन्यो
मलाई यी रचनाहरूका केहि कथाहरू सम्झन मन पराउँथ्यो जुन धेरै जसो मैले पढ्ने अवसर पाएका थिए। उही समयमा म उत्सुक थिए १ 1984। XNUMX पढ्न जुन मैले पढेको छैन र अरुलाई पढ्नु थियो। यस्तो सुन्दर क्षणको लागि धन्यबाद। बधाई! 🖐️❤️
ग्लेडिस एभलाईन आर्से काबेजालाई जवाफ दिनुहोस्
पाब्लो क्याब्रेरा भेगा भन्यो
लेखकको साहित्यिक स्वाद जस्तोसुकै भए पनि, मलाई के लाग्छ वास्तवमा ध्यानमा राख्नु, र रचनात्मक हुन चाहेको हो, त्यो पाठको अभिव्यक्त गरीबी हो। अवश्य पनि, सूची मनमानी र बहसात्मक छ, र मैले यो स्रोतको सन्दर्भबाट छुटेको छु जुन स्रोतले चित्रण गरेको छ कि यी ११ वास्तवमै ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा उत्कृष्ट साहित्य जत्तिकै विशाल छ।
इतिहासको पहिलो छापिएको पुस्तक "जत्तिकै अभावग्रस्त अभिव्यक्तिहरू ११ मे, 11" मा जारी गरिएको थियो "," यो अनौठो शीर्षक वास्तवमा इतिहासकै सब भन्दा राम्रो पुस्तक हो "वा" ... जुन बर्ष बित्दै जान्छ र परिमार्जन गर्दछ। उसको राम्रो भाग्य the यस निराशाजनक लेख र यसमा होस्ट गर्ने पृष्ठ लेख्ने व्यक्तिको पक्षमा थोरै बोल्छ।
Pablo Cabrera Vega लाई जवाफ दिनुहोस्
सर्वश्रेष्ठ अगाथा क्रिस्टी पुस्तकहरू
मार्टिन क्यासारिगो। तपाईले पिउनुहुन्छ भनेर बिर्स्न म धुम्रपान गर्ने लेखकको अन्तर्वार्ता लिन्छु